Sele luqalile uhlaselo? I-Psycholance yayisele inikezwe ukukhanya okuluhlaza kwi-2018 esekwe kwimeko ye-Els Borst / Bart van U. UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	12 Novemba 2019	• 24 Comments
Nabani na osakukhumbula ukubulawa kwalowo wayesakuba ngumphathiswa u-Els Borst kwaye ebengekayazi into ye PsyOp's ngelo xesha unokuba wachukumiseka kakhulu. UBorst wabulawa ngumntu 'odidekileyo'. Ubuncinci kwakuya kuthatha ixesha ngaphambi kokuba i-NFI yazi konke ukuba kunolwaphulo-mthetho, ngaphandle kwento yokuba uBorst wafunyanwa echibini legazi. Sithetha nje ngexesha silapha, kuba sonke sazi malunga nemeko ezinje ngamabali nemifanekiso kumajelo osasazo kwaye ngoku siyayazi ukuba, umzekelo, iAlgemeen Nederlands Persbureau (ANP) isezandleni zomenzi weTV; Umntu onestudiyo sefilimu kunye neebhiliyoni kwiakhawunti yakhe yebhanki. Kwaye ke awunakuthetha ngokuqinisekileyo ukuba ityala elinje lokubulala alibekwanga ndawonye njengephepha lefilimu ukulungiselela abantu amanyathelo amatsha wombuso.
Op 11 Matshi 2014 Ndibhale ngale nto ka-Els Borst: “Kodwa qaphela, kuba ngaphambi kokuba uyazi, i-GGD isemnyango wakho ukuze wamkelwe"Qaphela ukuba i-D yenkonzo 'sele ithathelwe indawo nguZ' 'wokukhathalela'. Kwi-2018, into endilumkise ngayo sele izalisekile. Kubangela umdla kakhulu ukufumanisa ukuba leliphi icala elikhankanyiweyo kuxwebhu lwabaphathiswa olubhengeza la manyathelo? Ngokuchanekileyo ewe, le ka-Els Borst kunye nommangaleli wakhe u-Bart van U.
Ngoku uza kuthi:Ewe, kodwa uBart van U ufunyenwe enetyala, uvalelwe ejele i-8 iminyaka kwaye wafumana i-TBS ngonyango olunyanzelekileyo, kunjalo ke iyinyaniMsgstr ". Umsebenzi we-PsyOp kukuba wonke umdlalo udlalwa ukusuka ku-A uye ku-Z ngokubambisana nezopolitiko, ubulungisa kunye neendaba; kubandakanya nembonakalo yeendaba ejikeleze ityala elinjalo. Kuphela kulapho abantu beya kungeniswa kwimodi yokwamkelwa yokuqalisa kwento ababengayi kuyamkela ngokwesiqhelo, kodwa ngoku bamkele 'njengemfuneko'. Kwii-PsyOps, ubungakanani buhlala buhlala 'Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo"kusetyenzisiwe, okuthetha ukuba ingxaki yempembelelo enkulu yoluntu iyenziwa ukuvuselela ukubanomsindo omkhulu kunye neemvakalelo kusetyenziswa amajelo eendaba nezopolitiko, kwaye emva koko bazise isisombululo ebesoloko sise-shelf. Ke ukuba unakho ukoyisa abantu ukuba 'indoda edidekileyo' ibulele uEls Borst, une-alibi egqibeleleyo yokuvalela abantu abadidekileyo. Ngaba uBart van U. ungumlinganiswa kwiskripti sePsyOO ekufuneka elungiselele lo mthetho? Ewe, kuchazwe ngokucacileyo ingxelo yokugqibela Iqela leqela labantu abanokuziphatha okubhidekileyo kwi-Ofisi yezeMpilo, ezeNtlalontle nezeMidlalo:
Ngenxa yezi zibophelelo, le leta ibhekiswa kwiNdlu ephezulu kunye neNdlu esezantsi. Kutshanje ufumene ingxelo yethutyana evela kuMnumzana Hoekstra ngamanyathelo ophuculo olulandelayo emva kophando kwimeko kaBart van U.
Kwaye yintoni enye kule leta? Ileta iyalela yonke imimandla ye-GGZ ukuba ithenge i-psycholance. Imoto enezixhobo ezikhethekileyo zokuthatha 'ukudideka abantu'. I-psycholance enjalo ihlala i-blind blind kwaye ineendlela zonke ezikhoyo kwikhabhathi yokubopha umntu ngokukhuselekileyo. Kusengqiqweni, unokucinga, kuba umntu odidekile onjalo unokuzabalaza. Emva kwetyala lika-Ane Faber, wonke umntu wachukunyiswa ngokupheleleyo ukuba azise le psycholance kunye netyala likaTijs H. ngokwendalo nabo banegalelo kumfanekiso wokuba ilizwe lethu ligcwele ngabantu abadidekileyo. Kuzo zozibini iimeko ndaye ndaqikelela ukuba izakuba yinto yokulungisa ukungavani kwabahlali ngokubanika ibala 'lomntu odidekileyo'.
Ileta evela kwinkonzo iqulethe into emangazayo kwaye ilindele ukuba kwenziwe umthetho omtsha wokwamkelwa. Nceda ufunde isiqwenga esingezantsi kwaye ukhumbule ukuba kwincwadi yakhe ye-1984 uGeorge Orwell uthetha 'ngepati' eguqula intsingiselo yamagama. Ubiza le "ntetho intsha" (ekwabizwa ngokuba "yintetho kabini"). Ihlala isisimanga ukuba igama 'lokukhathalelwa' likhethwe, malunga nento yalo, ukuba ujonga ngaphakathi kwiziko le-GGZ, mncinci ngononophelo, kodwa ngakumbi ngo 'ukuvalelwa xa uhambisa amayezakufuneka yenziwe. Yile nto ke ababhali bale ngxelo bayibandakanyayo phakathi kwezinye izinto njengengcebiso kule leta:
Iindlela apho uqhagamshelo ngakumbi lufunwa khona ngokukhawuleza kwaye kunokwenzeka: wanyanzelwa kwimithetho yokhathalelo, kuba ezi zikwinqanaba lokumisela kwaye zichonga umbutho wokukhathalela wenxalenye ebalulekileyo yeqela ekujolise kulo.
Kukho okuninzi kangangokuba kufuneka kubekho umthetho wokuvunywa okunyanzelekileyo (kuba ukumiselwa sele kufikile kwisigaba sokuphunyezwa- ngamafutshane: sele kuyenzeka ngaphandle komthetho). Oko kusikhumbuza ibhilikhi evela kuEdith Schippers apho ndandiqulunqa uxwebhu lwezikhalazo phantsi kwekhabin yangaphambili ngaphezulu kwamawaka amahlanu yasayinwa. Ngokufanelekileyo, lo mthetho usayilwayo wawuthetha ukuba abantu abasingqongileyo baziva ngathi bangabhidaniswa banokuthathwa yi-psycholance ngaphandle kokungenelela kwejaji okanye ugqirha wezifo zengqondo, kwaye iiyure ze-18 zinokuphonswa kwisisele ukuba ziqwalaselwe (benokulawula " amayeza ”). Lo mthetho wawungekamkelwa ngelo xesha, kodwa icebiso kule leta yoMphathiswa licacile ukuba kucwangcisiwe ukuba nomthetho apho. Kwaye ke oko sidinga i-PsyOp-jes ukuzisa abantu ngakumbi kwimodi yokwamkelwa. Kananjalo abo basebenzi be-GGZ ngokuqinisekileyo bayaqiniseka ukuba ukuba beza ne-psycholance yabo, ngokuqinisekileyo iya kulunga kwinto ethile.
Yinto yonke malunga nenkcazo yomntu 'odidekileyo'. Umntu ngumntu xa edidekile? Kuphela kuxa ubulala ibhinqa eliselula eliza kuhamba umjikelo we-ANWB kwibhayisekile yalo lodwa kwisiphango lize liyiphose ngaphaya kocingo lwesiseko somkhosi wasekhaya ukuze ulingcwabe, uligibisele kwaye ulifake emotweni kamama uthutha ukungcwaba kwakhona? Ngaba yilapho uhleli ngokungekho emthethweni ukuba ubambe izinja ngenxa yokuba ufumana izabelo kwiidemon? Okanye ngaba nawe ungumntu odidekileyo ukuba kunokwenzeka ukuba une-Chasi lokuziphatha kakubi kwi-Inshurensi yoKhuselo kwaye umbono wakho wahlukile kulowo wombuso?
Yintoni eye yaqinisekisa abantu zizinto ezigqithisileyo esizibonileyo kumajelo eendaba; lawo matyala endicinga ukuba angangumsebenzi weengqondo (PsyOps). Nangona kunjalo, isenzo kukuba xa umthetho ubhengeziwe kwileta yabaphathiswa sele uza kuza, abathandekayo bakho banokubiza i-psycholance kwaye bathi ungadideka. Emva koko unokuthathwa ngaphandle kokungenelela kwejaji okanye ugqirha wengqondo. I-Ruinerwold haunuts ye-media media hype sele ibeke isiseko sokususa umqobo wokuba kufuneka ubenesiqinisekiso sokukhangela. Ungathathelwa nje, 'njengobaba abangamageza' 'boosapho beziporho' kwaye uvaliweyo ukuze ubonwe.
Ngethamsanqa, ukuba konke kwenzeka kakhulu ngekliniki. Akukho namnye kubamelwane bakho oya ekhalaza. Emva kwayo yonke loo nto, ibonakala ngathi i-ambulensi, ibhasi oyikhweleyo. Imfamekisile iifestile kwaye uboshwe kakuhle. Mhlawumbi bayakuva usokola kancinci, kodwa abamelwane bakho nabo balungiselelwe nge-media kwaye abayi kumangala. "Uhlala unemibono engaqhelekanga"Ke baya kuthi. Kwinqaku ngu Iziko le-GGZ uMondriaan ukusuka eHeerlen sibona oku kulandelayo malunga nendlela othuthwa ngayo njengomntu onokuthi adideke (Qaphela ukuba akukho nto sele ikho, kodwa usenokuba nje okanye uza kudideka).
I-psycholance kukucokiswa kwesabelo esinikwe oomasipala ngurhulumente ukuba baqonde indlela yokusebenza efanelekileyo ye-1 ka-Okthobha ye-2018 ngokubhekisele kwiqela labantu ekujoliswe kulo lokuziphatha.
Uhambo oluchanekileyo luyimfuneko kuba abantu abangakhange benze tyala lolwaphulo-mthetho abayiyo kwimoto yamapolisa. Ukongeza, i-ambulensi ayisoloko ingekho kwimeko. Ngokusebenzisa izithuthi ezifanelekileyo, aba bantu bahanjiswa ngobuchule kwindawo ekhuselekileyo, emnandi, engenacala. Inkxaso-mali ikhutshelwe umqhubi ofanelekileyo othuthwe yi-ZonMW ixesha elingangonyaka. Ngeli xesha, iya kubekwa esweni ukuba isetyenziswa kangakanini kwaye nini isithuthi esifanelekileyo.
Kwinqaku ngu RTV Drenthe ukusuka kwi14 Agasti 2019 sibona ukuba i-psycholance iqhutywa rhoqo. Bavela phi bonke abo bantu badidekileyo ngequbuliso? Ngayiphi na imeko, sele sifumanise ngasentla ukuba ivulelwe isimbiza senkxaso, ngenxa yoko kubonakala ngathi kunefuthe elivuselelayo. I-psycholance yakhupha phantse amaxesha e-2018 kwi-900, kwaye ngokucacileyo oko kwakuyinto yomzabalazo. Kodwa njengoko sele kukhankanyiwe, sele sicwangcisiwe kusetyenziswa amajelo eendaba ngomfanekiso ukuba ukonyuka kuluntu kuyanda. Umzekelo, kwiveki ephelileyo sabona ukuba ubundlobongela kubasebenzi bokukhathalela ulutsha ngele bonyukile. Ngaba eso ayisosibonakaliso nje sokuba kuye kwakho ukothusa okongeziweyo koko kufunyenwe sisihloko esihle se-Orwellian? Ngaba sinikela ubungqina bokuhlaselwa okumsulwa kwi-GGZ kunye neenkampu zokuphinda kufundiswe emva komnyango omuhle obizwa ngokuba "kukukhathalela ulutsha" (jonga apha)?
Nangona kunjalo, amapolisa kufuneka akhokele i-psycholance rhoqo. Emva koko iarhente iqhuba ikhusela abasebenzi. Kunyaka wesibini i-psycholance iqhuba, ukunyuka okuncinci kobukrakra kunokubonwa. "Ewe kunjalo kuba siqhuba ngaphezulu, kodwa amapolisa ayazi apho angasifumana khona," ucacisa uHendriks.
Kwindawo eyayisakuba yiSoviet Union, abantu ababephikisana neembono ezazibekwa ngurhulumente babebizwa ngokuba ngabaphikisi. Ibali likaRuinerwold 'losapho' sele likhokelele ekubabekweni kwabantu abangavumelani nendlela yemfundo ngurhulumente. Aba ngabantu abakholelwa kwiziporho kunye nabantu abanegadi yabo yokwabiwa. 'Utata womphefumlo' waba lihlelo ngokwalo (kungenzeka kakhulu) ibali le-PsyOp. Sele sibona ukulungiswa koluntu apha. Inani labantu libunjwe kwimodi yokwamkela ixesha kunye nexesha kwakhona. Urhulumente ufuna ukuba unike ingxelo kubamelwane bakho. Oko kungangabantu abanokuziphatha "okuphambeneyo". Umzekelo, kwixa elizayo unokungavisisani nezifundo zemfundo kwisikolo saseprayimari, apho umntwana wakho afundiswa khona ukuba akayinkwenkwe okanye intombazana, kodwa usenokuthi akhethe isini. I-Ruinerwold 'ghost yosapho' PsyOp, sele ilile ibala lokuba xa ukhupha abantwana bakho esikolweni, uyindoda edidekileyo enokubeka abantwana bakho entolongweni. Kwaye ukuba unokudideka okunokwenzeka, i-psycholance inokuhamba kungekudala ngaphandle komqobo osemthethweni.
Ngaba siyakubona ukucocwa kwabangabaphikisi phantsi kwesikhokelo 'esinokudideka' 'kunye' nokukhathalela '? UJoseph Stalin uhleka kancinci engcwabeni lakhe kwaye uzakudumisa ilizwe laseDatshi ngendlela enoburharha ekwenzileyo ukuthengisa oku kubantu bayo. "Uhanjiswe ngendlela ekhuselekileyo, emnandi, engabeki tyala, ngokobungcaliMsgstr ". I-gulag ibuyile, kodwa kwi-jakethi 'yokunakekelwa'. Kwaye abasebenzi be-GGZ? Ewe, kufuneka bahlawule kunye nokuhlawulwa kwabo. Abaphazamisi kumbuzo wokuba kutheni umntu efanele ukubanjwa. Iya kuba yimfuneko kwinto ethile kwaye abo bakhethiweyo "abantu abadidekileyo" baya kuzola kungekudala xa sele befumene isitofu sabo sokuqala. "Umsebenzi ngumsebenzi, imali yimali, ukuba andiyenzi, omnye umntu uza kwenzaMsgstr ". I-Befehl yi-befehl.
Thenga ngoku incwadi entsha "Inyani njengoko siyibona", fumanisa yonke imiqolo yenkohliso nenkohliso kwaye ufumane nesisombululo esichaziweyo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: mondriaan.eu, lvvrenthe.nl
Wonke umntu waseDatshi onokuthi 'umntu odidekile' kunye nomgibeli wengqondo
Ingxoxo yanamhlanje ye-Bill Edith Schippers ejele ngaphandle kokuvalelwa
Inombolo yokurekhoda yabantu abadidekile kubangela ingxaki yempembelelo?
tags: ingqumbo, Bart, Isifuba, Els, eziziimbalasane, GGZ, Ndoda, ku bulala, ityala lokubulala, abantu, Ingqondo, uhlaselo, uhlaselo, inkxaso, U., van, kugwetywa, ididekile
12 Novemba 2019 kwi-13: 45
Kwenzeka ntoni kanye kulolo lutsha lukaRuinerwold 'ghost'. Ngaba yayiyi-hype enkulu okwethutyana kwaye emva koko akukho okunye. Ilungisiwe emhlabeni?
12 Novemba 2019 kwi-19: 53
Baphi abalimi? Umhlaba wokwakha? Njl.
"kaltgestellt"? Ewe, kunokwenzeka ukuba uqhankqalazo luvunyelwe kuphela kwaye ngakumbi xa belawulwa nguRhulumente okanye ngabameli bakaRhulumente 'abathunyelwe' kwimibutho. Ijongeka ngathi yayiyi-DDR yangaphambili. Hayi, loo nto ayinakwenzeka apha. Ukukhohlela.
13 Novemba 2019 kwi-21: 37
Amafama angenelele kwincoko eneemvakalelo kunye nesocopopant / sycophant, abale kwinzuzo yakho.
12 Novemba 2019 kwi-16: 49
Ndihlala ndatsho ukuba isimo sengqondo sokungasebenzi-ngamandla singenziwa nzulu ngumhlali ophakathi wase-Madurodam ... I-peat colonies, zaziphi zonke ezo nkampu zoxinaniso kwakhona?
12 Novemba 2019 kwi-19: 22
I-Mpuma kunye neNtshona itshintshiwe. Udonga lwawa 30 kwiminyaka eyadlulayo, kodwa lixesha lokuba iindonga ziphinde zakhiwe. Bona iMelika, jonga iMpuma Yurophu kwaye ngeli xesha abaseNtshona baseludongeni. Njengoko uhlala ubhala, udala ingxaki yokubaleka kwaye abantu bakhale ngenxa yeendonga kwaye bangaqondi ukuba iindonga zikuvalela. Cinga ukuba kungenxa yoko le nto uTrump efuna ukuthenga iGreenland, ahlukanise nayo yonke into, kungabikho ndlela yokubaleka inokwenzeka. Imidlalo yendlala, umboniso wokwenyani.
12 Novemba 2019 kwi-19: 59
I-East yayiluvavanyo lwabafana ababeqaphela ukuba ubusoshiyali obuqinisekileyo abusebenzanga ukugcina inani labantu abaqhelekileyo liphantsi. Ukuqhubeka nokubonakala, amakhwenkwe enza ngathi iMpuma iwile. Amampunge, umsi kunye nezibuko. Amakhwenkwe nawo aseMpuma. Ukuwa kweMpuma yayenzelwe ngenjongo yokufezekisa ukudibana phakathi kweenkqubo ezimbini ezahlukeneyo, ubukapitali kunye nobusoshiyali, kunye nabafana abakuluhlu oluphambili abalungelelanisa kakuhle. EMpuma naseNtshona gulag enkulu.
13 Novemba 2019 kwi-14: 04
ilanga, awuzukundixelela ukuba 'isigaba sokugqibela' i-11 / 9 / 1989-9 / 11 / 1989 yovavanyo beluqondisiwe kwaye 'lwalusasazekile' ukuyiphinda. Ah besilibaleke kwaphela, emva kwayo yonke loo nto sibuhlungu ngePolitburo eBrussels.
Amanenekazi namanenekazi eskripthi athanda ukutshintsha iindima ngamanye amaxesha. Igcina yonke into iyonwabisa, andithi? Ngaphandle koko unobuhlungu ngemfazwe ebandayo engafuni ukufudumala ... 😀
I-ps: Ngaba iifayile ze-STASI ekuqaleni kwe-1990 zazingabalulekanga kangako eBerlin ukuze ekugqibeleni zibhalwe? ... Ixesha lalingekavuthi, elo xesha ngoku kubonakala ngathi lifikile [iHerausnehmen und test]
13 Novemba 2019 kwi-14: 12
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosemarie_Albrecht (Usapho lakwa-Ursula 😉?
13 Novemba 2019 kwi-17: 47
Umhlaba uphela uyinto yegula kunye namakhwenkwe kuyo yonke indawo abambe izikhundla eziphambili. Bahlala befihla ukuba bangamalungu eklabhu yabantu abaqhelekileyo, kodwa phakathi kwabo bayazi malunga, iimbekiselo, kunye nokutshintsha amagama njl njl. Baye bancomane.
Ininzi into esingayithetha ngabo kodwa ewe siphila kwisidikididi kwaye ke abayithandi xa usithi iinyani. Bahlala benelona lizwi liphezulu, bazi yonke into kakuhle, bahlala benconywa, bla, bla, bla. Ewe abafuni ukuba abantu abaqhelekileyo babuze ukubangabafana bezikhundla ezikhulu, kwaye ukuba ngokwenene bangabantu 'abaphakamileyo'. Oku kungabeka emngciphekweni amalungelo abo kunye nezikhundla zabo ezibalaseleyo.
13 Novemba 2019 kwi-15: 26
psycholance kungekudala yonke indawo
13 Novemba 2019 kwi-21: 53
Nyana, ibali elinje!
UAgatha Christie okanye abanye ababhali bawela kumgibe wesi siganeko siyinyani
Umnumzana uStoker ovela e-Alkmaar 🙂
Umthengisi. “Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo wenze ingxolo enkulu ngokuhlwa. Kwakufuneka ndidlale ibhola ngosuku olulandelayo, ke ndambuza ukuba uyafuna ukuthambisa. Wabe esiza emva kwam ephethe iitagi ezimbini ezinkulu zasekhitshini. Ndinkqonkqoze emnyango ngela xesha. Jonga, ndiyinkwenkwe enkulu, kodwa andikabuyi nemkhonto. "
14 Novemba 2019 kwi-13: 10
@Marga, uyicinge lonto? besithetha nge psycholance
isaya kude kakhulu ngoku
Enjani yona ukuba mbi, yadutyulwa!
14 Novemba 2019 kwi-13: 25
Ukuba ingonyama ibalekile, ayidutyulwa kwangoko.
Emva kwayo yonke loo nto, umfazi wayenokufumana isibhamu sokudubula kuqala.
14 Novemba 2019 kwi-13: 28
Onke amabali eendaba ukwenza ukuba abantu baqhele ukusebenzisa ngokungagungqiyo ugonyamelo lwamapolisa aseMelika.
14 Novemba 2019 kwi-21: 31
Kwaye baya kuhamba imayile eyongezelelweyo:
Ngokuphathelele iyunifomu, amapolisa awaphantsi njengaphantsi kweefilimu ze-dystopian sci-fi ezivela eHollywood.
13 Novemba 2019 kwi-21: 31
Ityala liyanuka, inokuba icace gca ... Imvelaphi yodluliso lwezendalo andizange ndive kwanto kuwo wonke umntu 😀 Umtshana kungekudala uza kukhutshwa ngabo bonke abantu, umlo kufuneka uphule
_ Isithethi seVeldzicht sixelele i-RTV Oost ukuba umrhanelwa otyholwa ukwicandelo lolwaphulo-mthetho kwikliniki kwaye wafumana unyango lwengqondo. Ufanelwe ukuba uvela ejele._
Iklinikhi iphatha abaguli ngemvelaphi yodluliso.
14 Novemba 2019 kwi-01: 24
I-Heroepvoedingskampen, eguqulelwa ngumatshini wokuguqulela weendaba i-George Orwell ngoku kuthiwa: Unonophelo lwengqondo lwe-Transcultural
Wow! Kwaye bonke abasebenzi bayazithemba ukuba babonelela ngononophelo olufanelekileyo. Iingxelo zococeko kunye neengxoxo zeqela nabaphathi.
Ukuba umntu unomsindo ngayo yonke loo mfundo yokufunda kwakhona, sithi "kufuneka uye kwigumbi lokuphumla".
Uvelwano lubekwe njengengxaki.
“Ke tata, ubakhathalele bonke abantu abathandekayo emsebenzini namhlanje? Ubuyilungiselele kakuhle ipilisi zabo?
Ayisiyo inkxalabo, yintolongo leyo. Kukho izitshixo kwiingcango zensimbi enzima. Yintolongo (ndiza kuyiphinda). Yibone ukuba iyintoni: yintolongo. Inkampu yokufunda kwakhona. Yile nto kwiJamani yamaNazi yabizwa ngokuba yi-'40 / '45 kwinkampu yoxinaniso, kodwa ke yingubo ecocekileyo yokhathalelo. Yile nto ibizwa ngokuba "yigulag" eSoviet Union. Kukho amaqela aphikisayo phantsi kwesihloko esithi "isigulana sengqondo".
14 Novemba 2019 kwi-01: 28
Ngapha koko, zenziwe ngobuchule zekhamera imifanekiso yekhamera ekunokwenzeka ukuba yonke ibekwe kwinqanaba lokudala umbono wokuba konke kumnandi kakhulu kwaye kungokomntu.
Ipropaganda ibizwa ngokuba yiyo.
14 Novemba 2019 kwi-01: 43
Jonga ijelo le-YT kwaye ubone ukuba imifanekiso yamva nje ilayishwe nini kule veki. Kukho into ecekisekayo eqhubekayo kwimidiya ukuba ibala umbala weegusha ezinokukholelwa.INkonzo (amaziko ezomthetho) akhona ukukhusela ummi olungileyo kuyo nayiphi na into ephambukayo kwisimo eso okanye. esemgangathweni.
nali elinye iqwengana elinempahla apho abantu bengazange bakhathaze nokubeka igama phantsi kwalo. Le nto ke kufuneka idluliselwe kwintatheli, ngubani onika ezi ntlobo zeziqwenga? thabatha 'ubulungisa' kunye 'nokhuseleko' mhlawumbi ...
14 Novemba 2019 kwi-02: 02
Ewe ... kuyimbali emnandi ukuba itafile yesidlo sakusasa eqhelekileyo bayakwamkela kwaye bakholelwe abantu base-Dutch abasela ikofu ngokungakhethi, kuba ubuntatheli kwaye iyakuba yinyani ... "Ngokuqinisekileyo abayenzi loo nto"
14 Novemba 2019 kwi-02: 09
Ilungelelaniswe kwaye ndiyakwazi ukuyibonisa ngokugqogqa ngokulula ngokulandelelana .. Iqale ngaphezulu kweminyaka ye-6 eyadlulayo phantsi kwesikhokelo selungu le-VVD Opstelten
Ukwamkelwa kwaBantu abaDidekileyo
Iqela elitshintshayo kwisimo sokuziphatha
Ukuvulwa kwengcombolo 30 / 09 / 14 Ukwamkelwa kwabaNtu abaDidekileyo;
"Inokwenzeka loo nto!" NguMphathiswaI. Opstelten
14 Novemba 2019 kwi-02: 13
... le psychopath
UMphathiswa u-Opstelten uphendula uMvuzo oMkhuluwa oMkhulu
Amandla e-NLP, Amandla
30 Novemba 2019 kwi-16: 26
Mhlawumbi sele isaziwa kwabaninzi, kodwa yayintsha kum: iindawo zonxibelelwano zabantu abadidekileyo sele zivuliwe!
Ukuzingela kwegqwirha kwenkulungwane ye-21 kuvuliwe! La ngamanyathelo endawo ukwenzela ukuba siqhele ukuhamba kancinci ukuze sijongane kwaye sidlulise indlela abaziphatha ngayo kurhulumente. Ukuba lowo ngumgangatho omtsha, siya kuthi ngoko ke sifumane inani eliphakathi kwilizwe lonke.
Vumela ukuzingela kuqale 🙂
30 Novemba 2019 kwi-18: 04
@ Kutheni ufuna ...
I-Jeeeesus christ enkosi ngale ngxelo, ayiqondakali, ndiyathemba ukuba ihlaya.
Kodwa Ho !!!
Sinokutsho i-Opstelten en masse njengomntu odidekileyo.
Kwaye ke zimbalwa ;-), Nieuwkerkje kunye nokufa Nek etceeeteraaa ...
Ndiyazi ukuba masingasebenzisi le nkqubo, kodwa umgodi abawumbileyo bavunyelwe ukuba bawele ngokwabo, oya kuthi ngenye imini uza kwenzeka kubazukulwana babo abathi ngequbuliso bavuke ngequbuliso.
« Ingqina lesithsaba kunye nomdlalo ophakathi kolwaphulo-mthetho lukarhulumente kunye nommeli (Igqwetha lokulingana ngokuchasene nePlasman)
URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa kwi-New World Order" uqinisekisa: IJensen.nl ilawulwa ngokuchaseneyo »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.408.492